रातारात पैसा कमाउने उद्देश्यले ल्याबहरु खुल्दै « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७१, ३० पुष बुधबार ०८:३९ मा प्रकाशित
मान्छे जति लोभी भए पनि आफ्नो स्वास्थ्यसाग कुनै सम्झौता गर्न सक्दैन । आफ्नो रोगको पहिचान र निदानका लागि जे जति परे पनि पैसा तिर्न तयार हुनुपर्छ । यहि बाध्यताको फाइदा उठाउने गिरोह स्वास्थ्य क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा निकै बलियो भइरहेको छ । यो गिरोह यति बलियो छ कि, मानव स्वास्थ्यसाग गाासिएका हरेक ठाउामा उसको पञ्जा बलियोसाग कसिएको छ ।
प्याथोलोजी सेवा पनि अहिले यस्तै गिरोहको कब्जामा जान थालेको आभास हुदैछ । डाक्टरले बिरामीको उपचार गर्नुअघि रोग पहिचान गर्नका लागि सबै रिपोर्ट लिन हरेक बिरामीलाई प्याथोलोजीमै पठाउनुपर्छ । यहि विवशताको फाइदा उठाउादै अहिले गल्ली गल्लीमा अवैधानिक रुपमा पनि ल्याबहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । यो हाम्रो आरोप होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमाणित गरिसकेको तथ्य हो ।
अख्तियारले केही समयअघि सबै ल्याबहरुलाई अनुगमन गर्दा कतिको सञ्चालन स्वीकृति नभएको भनेर सार्वजनिकनै गरेको थियो । जनस्वास्थ्यमाथि यो भन्दा गम्भिर लापरवाही र खेलवाड अरु के हुन सक्छ ? सञ्चालन स्वीकृतिनै नभएका, स्वीकृति लिएर पनि मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएका, दक्ष जनशक्ति र प्रयोगशाला नभएका ल्याबहरुले दिने रिपोर्टका आधारमा जनताले कस्तो सेवा पाउलान् ? यो गम्भिर प्रश्नको जवाफ सम्बद्ध पक्षले खोज्नुपर्छ र जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ कि हाम्रो जीवनमाथि खेलवाड हुने छैन । नियम अनुसार नचल्नेहरुलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्छ । कारवाही गर्ने अधिकार छैन भने सम्बद्ध निकायहरु पन्छिन मिल्दैन ।
सरकारले पनि ल्याब सेवा भएका हरेक स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तर हेर्ने निकायको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यसरी सरकारले गुणस्तरीय प्याथोलोजी सेवा पाउने जनताको अधिकार स्थापित गर्न राष्ट्रियस्तरबाट नै यस्ता कुरामा निगरानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आफ्ना नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो । गल्ली गल्लीमा च्याउसरी प्याथोलोजी ल्याव भएपनि उनीहरुले दिने गरेको सेवा कति सेवामुखी छन् ? यसको खोजी र अध्ययन हुन ढिला भइसकेको छ ।
सेवा दिने भन्दा पनि रातारात पैसा कमाउने उद्देश्यले ल्याबहरु खुल्न थालेका छन् । यसलाई नियमन र अनुगमन नगरे भयावह अवस्था आउन सक्छ । जनताको जीवनसाग गाासिएको हुनाले ल्याबले दिने सेवा गुणस्तरीय र जिम्मेवारपूर्ण हुनैपर्छ । प्याथोलोजी सेवामा गुणस्तरीय उपकरणको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसलाई चलाउन सक्ने दक्ष प्राविधिक अर्को महत्वपूर्ण भाग हो । अब ढिला भइसकेको छ, गुणस्तरीय र जिम्मेवार प्याथोलोजी सेवाका लागि स्वयं यसमा लागेका व्यवसायीहरुनै जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।